SAWIRADA: Dal Afrikaan ah oo Hilibka Dameeraha si yaab leh looga jecel yahay. - iftineducation.com
iftineducation.com – Mid ka mid ah wadamada ku yaala Qaarada Afrika ayaa noqdey dal si weyn looga isticmaalo hilibka dameeraha, sida ay baahiyeen Qaar ka mid ah warbaahinta Caalamka oo soo bandhigay Sawiro iyo Muuqaalo ku saabsan arrintani.
Warbaahinta ayaa sheegay in dalkani dadkiisu wax iska caadi ah la tahay cunista Hilibka Dameerada, aadna ay u jecel yihiin.
Dalka Zimbabwe ayaa lagu sheegay in uu yahay Halka aadka looga isticmaalo Hilibka Dameeraha.
Suuqyada dalka Zimbabwe gaar ahaan Waqooyiga dalkaas ayaa maalin kaste waxaa ku arkeysaa kala iibsiga hilibka Dameerada, kaas oo mararka qaar ka qaalisan Hilibka caadiga ah sida Hilib Ariga iyo kan Lo´da .
Madaxweynaha mudada dheer xilka dalka Zimbabwe hayay Mr.Robert Mugabe ayaa dhowr jeer waxa uu shacabkiisa ku dhiira galiyay in hilibka Dameerada uu yahay caafimaad aysana dhag jalaq u siin dacaayada iyo aflagaadada kaga imaaneysa warbaahinta Caalamka .
Soomaaliya Dameeruhu waxay ka mid yihiin xayawaanada la dhaqdo, laguna intifaaco, hase yeeshee aan la cunin, waxayna dadka Soomaaliyeed la yaabaan marka la yiraahdo Dameer Hilibkiisa ayaa la cunaa.